Alignment to Air 3D Animation - Dhizaini magazini
3D Animation Kana zviri zveiyo yekusika tsamba yemafirimu, Jin akatanga nemavara A. Uye, kana zvasvika padanho repfungwa, akaedza kuona kwakawanda kusimba achifunga nezvehunyanzvi hwake hunoshanda asi kuronga panguva imwe chete. Ari munzira, akauya nemazwi anopokana akanyatsomira achifunga zano rake munzira yakati fananei nematanho kumhepo rinova musoro webasa iri. Uine izvozvo mupfungwa, iwo mifanidzo inopa chaiyo nguva uye yakaderera pane izwi rekutanga. Kune rumwe rutivi, izvi zvinopera pamwe neyakagadzika uye yakasununguka vibe kuratidza tsamba yekupedzisira.
Zita rechirongwa : Alignment to Air, Vagadziri zita : Jin Jeon, Izita remutengi : Jin Jeon(J2Motion).
Bhaisikopo, vhidhiyo uye dhizaini yemifananidzo
3D Animation Jin Jeon Alignment to Air